Arch Linux vagadziri vanoronga kushandisa zstd mu pacman | Linux Vakapindwa muropa
Arch Linux vagadziri vanoronga kushandisa zstd mu pacman
Arch Linux vagadziri vaburitsa nguva pfupi yadarika kuburikidza nesitatimendi pa chinangwa chako kugonesa tsigiro yekumanikidza algorithm zstd (inosanganisirwa kubva munaNovember 2017 muLinux kernel 4.14) mune pacman package maneja.
Kubva Arch Linux vanogadzira yakaita kuenzanisa kweakasiyana compression algorithms, mukupedzisira ivo vakasarudza kuronga kushandisa zstd panzvimbo yeiyo default compression algorithm mune devtools. Iyo yazvino compression nzira iri "xz-cz-", iyo isina tambo imwe uye inononoka saka timu inoda kuitsiva ine algorithm inokurumidza.
Kuenzaniswa neiyo xz algorithm, kushandisa zstd kuchakurumidzisa kumanikidza kwepaketi uye kusunungura (sezvo ichipa yakakura yekutsvaga hwindo uye nekukurumidza entropy encoding nhanho, uchishandisa Finite State Entrop), kuchengetedza compression level. Nekuda kweizvozvo, kuchinjira ku zstd kuchawedzera kumhanya kwekuiswa kwepakeji.
Iyo zstd compression algorithm inopa nekukurumidza kumanikidza uye kudzvinyirira, uku uchichengetedza compression ratio yakafanana ne xz. Izvi zvinokasira kumisikidzwa kwepakeji ne pacman, pasina kumwe kunetsa. Vakapindura muchirevo Arch Linux vanogadzira
Tsigiro yekumanikidza mapakeji uchishandisa zstd iyo inosanganisa inosanganisa gare gare, ichaonekwa mushanduro ye Pacman 5.2, asi kumisikidza mapakeji akadaro kuchada vhezheni yezarchd libarchive.
Pacman ndiye Linux Arch Linux package maneja, inokwanisa kugadzirisa kutsamira, uye nekurodha pasi nekumisikidza mapakeji anodiwa. Mune dzidziso, mushandisi anongoda kuita chete kuraira kunyatso gadziridza iyo system.
Pacman anoshandisa tar-yakazara uye gzipped kana xz-akaomeswa mafaera emapakeji ese, rimwe nerimwe riine rakanyorwa mabhinari. Iwo mapakeji anotorwa pasi kuburikidza neFTP, unogona zvakare kushandisa HTTP uye emuno mafaera, zvinoenderana nekuti imwe neimwe yekuchengetera inogadziriswa sei. Inoenderana neLinux Arch Vaka Sisitimu (ABS) inoshandiswa kugadzira mapakeji kubva kunobva kodhi.
Zstandard (zstd) yakanga yakagadzirirwa kupa compression ratio yakaenzana neiyo ye DEFLATE algorithm, asi nekukurumidza, kunyanya kudzvinyirira. Inogona kugadziriswa nematanho ekumanikidza kubva pane zvisina kunaka 5 (nekukurumidza) kusvika makumi maviri nemaviri (inononoka kumanikidza kumhanyisa, asi yakanyanya compression ratio).
Iyo zstd package inosanganisira kuita kwakaenzana (kuwanda) kuverenga uye kudzvinyirira. Sezvo yeshanduro 1.3.2, zstd sarudzo inoshandisa yekutsva-kure-kure kutsvaga uye kudzikisira kwakafanana ne rzip kana lrzip.
Kumhanyisa kumhanya kunogona kusiyana nechinhu makumi maviri kana zvimwe pakati pematanho anomhanyisa uye anononoka, nepo kudzikisira kuchikurumidza zvakafanana, zvichisiyana nepasi pe20% pakati pematanho anomhanya uye anononoka.
Zstd ine yakanyanya kukwirisa nhanho inopa compression ratio padhuze ne lzma, lzham uye ppmx uye inoshanda zvirinani pane lza kana bzip2. Zstandard inosvika pari zvino Pareto muganho, sezvo iri decompresses nekukurumidza kupfuura chero imwe algorithm inowanikwa parizvino ine yakaenzana kana iri nani compression ratio.
Maduramazwi anogona kukanganisa hukuru hwekumanikidza kwemafaira madiki, saka iyo Zstandard algorithm inogona kushandisa dudziro-yakapihwa compression duramazwi. Iyo zvakare inopa yekudzidzira maitiro, inokwanisa kugadzira duramazwi kubva kune seti yemasampuli.
Kunyanya, duramazwi rinogona kutakurwa kugadzirisa maseti makuru emafaira ane redundancy pakati pemafaira, asi kwete hazvo mukati mefaira rega rega, semuenzaniso mafaira egi.
Naizvozvo, usati watanga nekugovera kwemapakeji akaomeswa uchishandisa zstd mukati meArch Linux chiteshi lVashandisi vanofanirwa kuisa libarchive kutanga ingangoita vhezheni 3.3.3-1 (pasuru ine iyi vhezheni yakagadziridzwa gore rapfuura, saka ingangoita vhezheni inodiwa yere libarchive yatove kuiswa).
Mapakeji akatsimbirirwa ne zstd achatumirwa pamwe nekuwedzera ".pkg.tar.zst".
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Arch Linux vagadziri vanoronga kushandisa zstd mu pacman
Project RIP: FPS Nyowani Ichangobva Kuburitswa yeLinux
Iyo itsva vhezheni yeVirtualBox 6.0.14 inosvika nerutsigiro rweLinux 5.3